ဂျူး10 on ဆုံနေရက်နဲ့ လွမ်းလေခြင်း
I remember hating this book when I first read it when it was released. I used to think her characters overachieve(?) despite their backgrounds. The female protagonist was lying to herself that she didn't love Mg and I felt very frustrating. But now that i'm older(?) and read this book once again, I kind of understand heralittle more (butistillhateher). This book is set in three locations - yay nan chaung, yangon and france, so it's alwaysaplus to read about different places than my city. I took one star off because I felt very frustrated while reading this, hating the female protagonist, and another halfastar off because I can do so. 😎
မောင် ကိုယ့်ဆီက ဘာကိုများ လိုချင်တာလဲ။ဘာကို တောင်းမှာလဲ။ ခါတိုင်းလို ဂျစ်ကန်ကန်မျက်နှာပေးဖြင့် လက်ထပ်ချင်တယ်ဟု တောင်းဆိုနေကျ မောင့်မျက်ဝန်း မှုန်ဝေဝေကို မြင်ယောင်မိတော့ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းတွေ နွေးပူသွားသည်။ ခြေရာဖျောက်ကောင်းတဲ့သူ အခု သူ ဘယ်မှာပါလိမ့်။
ကျွန်မသိသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ မောင်သိသည့်အချစ်နှင့် မတူဘူးဟု ကျွန်မ ယူဆသည်ဆိုတာ မောင် လက်ခံချင်မှ လက်ခံမှာပေါ့။
မောင်နှင့် ကျွန်မ ဝေးခဲ့ကြရခြင်း၏အခြေခံအကြောင်းကလည်း အဲဒါပါပဲ။
✻ [BOOKS] ✯ ဆုံနေရက်နဲ့ လွမ်းလေခြင်း By ဂျူး ❅ – Larringtonlifecoaching.co.uk Amazing E-Book, ဆုံနေရက်နဲ့ လွမ်းလေခြင်း by ဂျူး This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take Amazing E Book, ဆုံနေရက်နဲ့ လွမ်းလေခြင်း by ဂျူး This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book ဆုံနေရက်နဲ့ လွမ်းလေခြင်း, essay by ဂျူး Is now on our website and you can download it by register ဆုံနေရက်နဲ့ Paperback what are you waiting for? Please read and makearefission for Download PDF books you.
ဆုံနေရက်နဲ့ Paperback what are you waiting for? Please read and makearefission for Download PDF books you."/>
About the Author: ဂျူး
Ju isaBurmese novelist, well known for her strong, intelligent female charactersDespite her interest in writing, upon her mother's prodding, she pursued medical studies at the Institute of Medicine, Mandalay She started writing while in medical school, and her first short story ရာဇဝင်ထဲမှာမောင့်ကိုထားရစ်ခဲ့ was published in Her writing ဆုံနေရက်နဲ့ Paperback career took off in the late s, with her debut.